सहकारी संस्थामा ऋण तथा लगानीका बारेमा समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ यसलाई सबैले बिभिन्न तरीकाले बुझ्ने गरेको पाईन्छ । ऋण ब्यक्ति वा संस्थाले मात्र उपलब्ध गराउनेछन् । सजिलो तरीकाले यसलाई बुझ्नका लागि ऋण भनेको अर्काको सम्पती अथवा अर्काको पूँजी नै हो । जुन बिभिन्न खालका शर्त सहित उपलब्ध गराउनेले प्रदान गरेको हुन्छ । सहकारी संस्थामा शेयर सदस्यहरुले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्न रकम लिन्छ लिनेको लागि त्यो पैसा ऋण हो । जसले आफ्नो वा संस्थागत रुपमा सर्त सहित बिभिन्न तरीका र उपाय अपनाई पैसा दिन्छ त्यो नै प्रदान गर्नेको लागि लगानी हो । जसलाई रकमको अभाव हुन्छ त्यसले कुनै न कुनै वहनामा दोस्रो पक्षसँग पैसाको जोहोको खोजी गर्दछ । अर्काे पक्षसँग पैसा माग्न पनि त्यती सहज चाहि पक्कै छैन । कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले कसैलाई रकम हस्तान्तरण गर्नका लागि सम्वन्धित पक्षले कुनै न कुनै आधार तयार गरेको हुन्छ । हाम्रा वरीपरि पनि ब्यक्ति वा संस्थाले बिभिन्न प्रकृया अपनाई आफ्नो अनुकुलतामा धेरै ब्याजदर कायम गर्दै ऋण लगानी गर्ने चलनहरु छन् । त्यस्तो अभ्यासले ऋण लिने ब्यक्तिको दैनिक जीवनमा ठूलो उतारचढाव भइरहेको पाईन्छ यसलाई सहजिकरण वा सजिलो बनाउन स्थानीयस्तरमा गठन भइ सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरिरहेका छन् । र ठूलो हिस्सामा ब्याज लिने ब्यक्ति तथा संस्थाहरु बिस्तारै विस्थापित भई विधि सम्मत सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्ने सहकारीहरुको प्रतिष्पर्धा सहितको विकास भएको पाईन्छ । कसैसँग पैसा लिनका लागि ऋण दिने मानिसले पनि बिभिन्न खालका विधि तथा नीतिहरु अपनाउँछ । कसैले पैसा पाउँछ भने दिने सहकारी तथा ब्यक्तिको शर्त मान्न उ तयार हुुनुपर्दछ तर शर्त चाँही कस्तो मान्ने भन्ने बिषयको ख्याल गर्नुपर्दछ । प्राप्त गरेको ऋण प्राप्त गर्नेले आफुलाई समस्या परेको कुरामा खर्च वा प्रयोग गर्ने गर्दछ । ऋण निश्चित अवधि वा समयमा फिर्ता गर्ने गरी लगानी गरिएको हुन्छ । ऋण लिएपछि शेयर सदस्यहरुको लागि अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । किनभने आफना आवश्यकतामा लिएको रकमलाई अन्य फजुल खर्चका रुपमा मात्र नभै सहि अर्थमा आम्दानी, आय आर्जनका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नसक्नुपर्दछ । जसका कारण ऋण लिएको सहकारी संस्था वा ब्यक्तिलाई सजिलै तिर्नको लागि वातावरण बन्न सक्छ ।
हाम्रो परिवेशमा आफ्नो गर्जो टार्न मुख्यतया चारवटा आर्थिक क्षेत्रहरु देखिन्छन । बित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न निकायहरु जस्तै बैंक तथा सहकारीहरु नै प्रमुख रुपमा देख्न पाईन्छ । बिषेश गरी सहकारीको क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता संस्थाहरु नै शेयर सदस्यहरुको आवश्यकता पुरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरिरहेका छन् । अझ जुन स्थानमा सहकारीको पहुँच पुगेका हुदैन त्यस्ता स्थानमा सदियौ देखि चलन चल्दै आएका साहु महाजनहरुबाट आवश्यकतालाई पुरा गर्ने भूमिका निर्बाह भएको पाईन्छ । महंगो रुपमा लिइने यस्ता पैसाले जीवनलाई असहज बनाइदिन्छ किनभने यस्तो पैसाको ब्याजदरका कारण मान्छे उभो लाग्न सक्दैन । कुनैकुनै बेला त आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि आफ्ना नातेदार तथा इष्टमित्रबाट पनि आर्थिक खाँचोटार्न सकिन्छ । साथै समुदायमा रहेका बिभिन्न किसिमका सामुदायिक संस्था तथा उपभोक्ता समिति तथा समुहहरुबाट समेत आर्थिक पक्ष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्नुपूर्व बिभिन्न कुरामा अवस्य बिचार पुर्याउनुपर्नेहुन्छ । ऋण जो, जसलाई लगानी गरिन्छ संस्थागत रुपमा एउटै खालका नियमहरु लगाई लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्झौता अनुसार लगानी भएको लगानी छ त्यसलाई भनेको समयमा फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा सहकारी संस्थाहरु विधि सम्मत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्दछ । बिषेश गरी शेयर सदस्यहरुलाई एउटै खालको ब्याजदर कायम गराउने कार्यले संस्था सञ्चालन अझ प्रभावकारी हुन जान्छ । शेयर सदस्यहरुले लगेका पैसा सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने बिषय समेत उत्तिकै महत्व मानिन्छ भने एकपछि अर्को गर्दै ऋण तथा लगानीलाई द्रुत रुपमा वा छिटो छिटो परिचालन समेत गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा सबै शेयर सदस्यहरुको पालो पुग्ने र संस्था प्रति जनविस्वार समेत कायम हुन्छ । भूल्नै नहुने के हो भने आन्तरिक रुपमा ऋण लगानी गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुले संस्थामा आवश्यक रेकर्ड नै नराखि जथाभावि रुपमा लगानी गरिरहेको समेत पाइएका धेरै उदाहरणहरु छन् । यो प्रकृया तथा विधि बिल्कुलै गलत हो ।
लगानी गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । सर्व प्रथम जसले ऋण स्वरुप प्राप्त गरेको रकम छ त्यो रकमलाई आम्दानीमा बृद्धि गर्न सकिने क्षेत्रहरुमा प्रथमिकताका साथ राखि लगानीको सुनिश्चितता गर्नु उपर्युक्त मानिन्छ । आम्दानीको श्रोत कमी भएका शेयर सदस्यहरुलाई अवसर प्रदान गराउन सक्नु पनि सहकारी संस्थाको दायित्व हुन्छ । ऋणको पैसा लगेर शेयर सदस्यले सञ्चालन गर्ने व्यवसायको अनुभवजन्य सिकाईहरु के कति छन् ? व्यवसायिक योजाहरु छन् की छैनन् ? अन्य आम्दानीका श्रोतहरु के के छन् ? घरपविारबाट उसलाई के कति सहयोग प्राप्त हुन्छ । वातावरणीय रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि यसलाई अनुकुल छ वा छैन ? सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरुप व्यवसाय हो की होइन ? सम्वन्धित व्यवसायमा यसको रुचिहरु के कति छन् ? भनेर उक्त व्यवसायले व्यवसायकर्तालाई नाफा चाहि कति होला ? भन्ने बिषयको लेखाजोखा नगरी ऋण लगानी गर्दा सहकारीको पैसा धेरै मात्रामा समयमा नउठने गर्दछ र यसले शेयर सदस्यलाई त हानी हुन्छ नै तर सहकारी संस्थाको पनि संस्थागत अस्तित्व गुम्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ । त्यसैले यी र यस्ता खालका बिषयलाई महत्वका साथ बिचार गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा सहकारी संस्था दीगो रुपमा सञ्चालन भइ आर्थिक समृद्धि हुन जान्छ ।
अधिकांस सहकारी संस्थाहरुको मुख्य कार्य भनेको आर्थिक परिचालन नै हो । वा सबैजसो सहकारीहरुमा आर्थिक अथवा पैसाकै व्यवसाय गरेका हुन्छन् । सहकारी संस्थामा सबै भन्दा चनाखो हुनुपर्ने अर्थात पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने पक्ष नै आर्थिक पाटो नै हो । जहाँ आर्थिक पक्ष सफल र सहज देखिन्छ त्यहाँ शेयर सदस्यहरुको सहयोग र विस्वास जित्न सकिन्छ । संस्थामा रहेका नेतृत्वहरुसँग आर्थिक परिचालनको पक्ष राम्रो र ज्ञान भएको खण्डमा संस्था द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । दर्ता भएर लामो समय सम्म पनि संस्थाको आर्थिक उन्नती हुन नसक्नु भनेको शेयर सदस्य र संस्था बीचको तालमेल सन्तोषजनक नहुनु पनि हो ।